Ciidan 18,000 ah oo Loo Dhisayo Dowladda Federaalka Soomaaliya | Shabakada Gabooyaha
Ciidan 18,000 ah oo Loo Dhisayo Dowladda Federaalka Soomaaliya
Madaxweynaha dowaladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka shaqeynaya qorshe lagu dhisayo ciidan ka kooban 18, 000 oo askari oo u qeybsan 6 dowlad goboleed oo mid kasta laga doonayo 3,000 oo askari oo loogu talogalay xasilinta iyo nabadgalyada dalka.
Qorshaha lagu dhisayo ciidanka oo loogu magacdaray (National Security Architecture) ayaa ah mid noociisa ah kii ugu horreeyay lagana filayo guulo wax ku ool ah in lagasoo hooyo.
Ciidamadan ayaa ah kuwo loogu talogalay waddo furista iyo la dagaallanka al-Shabaab iney ka safeeyaan dhamaan deegaannada ay ku harsan yihiin ee ay ka joogaan gobollada kala duwan ee dalka.
Ciidamada la dhisayo ayaa ka madax bannaan kuwa hadda dowladda federaalka u diiwaangashan oo iyaguna iskooda si gaar ah loogu adeegsan doono gurmadka iyo howlgallada gaarka ah ee dowadda federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Jubbaland oo markii uu Kismaayo ku noqday ka hadlay shirka maamulgoleedyada iyo kan dowladda federaalka ayaa sheegay “Shirka guud ahaan wuu fiicanaa, waxaa la isla gartay in nin walbaaba halkii kaga aaddan inuu waddanka dhankiisa ka qabsado, oo shaqada inta kaga aaddan uu qabto intaas ayay ahayd muhiimadda taana waa la isla gartay”.
Si kastaba, howlaha wadajirka iyo wadashaqeynta dhaw ee maamulgoboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa u muuqda mid si wanaagsan ku billowda lana filayo inuu sii kordhaan shirarka noocan oo kale ah.